Candlestick ပုံစံ အမျိုးအစားပေါင်း အများအပြားရှိပါတယ်. ဒီမှာတော့ လူကြိုက်အများဆုံး ပုံစံတွေကို ရှင်းပြမှာပါ. သင့်တော်အသုံးဝင်တဲ့ အချက်အလက်ပြ signal တွေဟာ နေ့စဉ်ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်. H4 နဲ့ H1 မှာဆိုရင်တော့ ကောင်းကောင်းအသုံးချဖို့ရာ အဆင်မပြေပါဘူး. အပတ်စဉ် နဲ့ လစဉ်မှာဆိုရင် ယေဘုယျ trend လမ်းကြောင်းခန့်မှန်းမှုအတွက် reliability ကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်မှုဟာ ပိုတိုးပါတယ်. ဒါပေမဲ့ ခဏတာ ပြောင်းလဲမှုကြီးတွေ ဖြစ်နိုင်ခြေကလည်း ပိုများပါတယ်. ဥပမာ candlestick ရဲ့ အချောင်းအတံလေး ရှည်ရှည်လေးဖြစ်နေတာမျိုးပေါ့.
ပြောင်းပြန်လှန်ဖြစ်မှုဖြစ်တဲ့ ပုံစံက trend လမ်းကြောင်း ပြောင်းမှာကိုပြနေတာပါ. Trend အသစ် အစမှာ entry point ကို သတ်မှတ်တဲ့အခါဆို ထိုပုံစံဟာအသုံးဝင်ပါတယ်.
Trend လမ်းကြောင်းရှည်လေလေ အချက်ပြ signal အားကောင်းလေလေပါ.
Trend မတ်မတ်လေလေ အချက်ပြ signal အားကောင်းလေလေပါ.
အားကောင်းတဲ့ resistance/support level နားမှာ အချက်ပြ siginal အားကောင်းကောင်း ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိပါတယ်.
မကြာသေးမီအချိန်က ထရိတ်ဒင်း မှာ tweezer ဇာဂနာပုံစံ တွေရှိနေမယ်ဆိုရင် အချက်ပြ siginal ဟာအားကောင်းမှာပါ.
အကျ Bearish ပြောင်းပြန်လှန်ပုံစံတွေဟာ Uptrend အတက်လမ်းကြောင်းရဲ့ အဆုံးမှာဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်.
ကြယ်ကြွေပုံစံ shooting star . one candle ဖယောင်းတိုင် တစ်တိုင် ပုံစံ . Candle ရဲ့ ကိုယ် (အတုံးလေး) က သေးပါတယ်. အပေါ်အချောင်းအတံက အတုံးကိုယ်လေးထက် ၂ဆ ရှည်ပါမယ်. အပေါ်အချောင်းအရှည်လေးကဘာကိုညွှန်ပြသလဲဆိုတော့ ဈေးကွက်က resistance နဲ့ supply level နေရာတွေကို ရှာဖွေနေတယ်ဆိုတာ ပြပါတယ်. ဒါပေမဲ့ အပေါ်ပိုင်း upside ကို အကျ bear ကပယ်လိုက်ပါတယ်. Candle ကရောင်အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်. ဒါပေမဲ့ bearish အကျဆိုရင်တော့ အချက်ပြ signal က အားကောင်းပါမယ်.
သောကြာကြယ်ပုံစံ ဖယောင်းတိုင် ၃ ချောင်းပုံစံ ရှည်လျားတဲ့ အတက် bullish candle ပြီးနောက် အတက်ဟာကွက်အဟ လေးရှိနေပါတယ်. အတက်မှာအထိန်းအချုပ်ရှိနေပါတယ် ဒါပေမဲ့ အရမ်းကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူး. ဒုတိယ candle လေးကသေးပါတယ်. အရောင်ကိုလဲ ဂရုစိုက်စရာမလိုပါဘူး. တတိယတစ်ခုကတော့ အဟလေးနဲ့အောက်မှာ စပါတယ်. ပြီးတော့ အရင်က အတက်အဟလေးကို ဖြည့်ပေးပါတယ်. ပထမတစ်ခုနဲ့ယှဉ်ရင် ဒီတစ်ခုက ပိုရှည်ပါတယ်.
Doji ပုံ သောကြယ် . candle သုံးခုပုံစံ. သူက သောကြာကြယ်နဲ့ဆင်တူပါတယ် ဒါပေမဲ့ signal အားပိုကောင်းပါတယ်. အကြောင်းကတော့ အလယ်က candle က doji ပုံစံဖြစ်လို့ပါ.
Hanging man တွဲလွဲခိုပုံစံ. Candle တစ်ခုတည်းပုံစံပါ. bullish trend အတက် လမ်းကြောင်း ရဲ့အဆုံး သို့မဟုတ် top level သို့မဟုတ် support level တခုခုကိုပြနေနိုင်ပါတယ်. ထိုဟာက အောက်အချောင်းအတံလေး တိုနေပါမယ်. ထိုအတိုလေးက အတုံးကိုယ်လေးထက် ၂ဆ အနည်းဆုံး ရှည်ရပါမယ်. Candle ကရောင်အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်. ဒါပေမဲ့ bearish အကျဆိုရင်တော့ အချက်ပြ signal က အားကောင်းပါမယ်. အကျဖြစ်တာကိုအတည်ပြုတဲ့ သတင်းအချက်အလက်လိုအပ်ပါတယ်. ဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့ candle တခုရဲ့ open အောက်နဲ့ အကျ candle နဲ့ ကပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ အရောင်း အချက်ပြ signal ကို အတည်ပြုလို့ရပါပြီ.
တိမ်မည်းဖုံးပုံစံ . Candle ၂ခုပေါင်း ပုံစံ. ပထမတစ်ခုက အတက် bullish နဲ့ ရှည်တဲ့ အတုံးကိုယ်လေး ပါပါတယ်. ဒုတိယတစ်ခုကတော့ open က ပထမတစ်ခုရဲ့ close အထက်နားမှာရှိပြီး၊ close က ပထမတစ်ခုအတုံးကိုယ်ရဲ့ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း အောက်မှာရှိရမှာပါ. သူ့အတုံးကိုယ်လေးက ရှည်ရှည်လေးဖြစ်ရမှာပါ.
အကျဝန်းရံပုံစံ . ဖယောင်းတိုင် candle ၃ ချောင်းပုံစံ. ပထမတစ်ခုက အတက်ပါ. ဒုတိယတစ်ခုက အကျ ဖြစ်ပြီး open က ပထမတစ်ခုရဲ့ အမြင့် high ထက်ပိုမြင့်ရပါမယ်. Close က ပထမတစ်ခုရဲ့ low ထက်ပိုရပါမယ်. ယှဉ်လိုက်ရင် သူက ပိုရှည်ပြီး လှမ်းဝန်းရံ ငုံသလိုမျိုးဖြစ်နေတာပါ. အသင့်အတင့် အချက်ပြ siginal က အားကောင်းပါတယ်.
အကျ harami ဟရမိုင် . candle ၂ချောင်းပေါင်းပုံစံပါ. ဒုတိယတစ်ခုက ပထမတစ်ခုရဲ့ဝန်းရံမှုကိုခံရပြီး ဆန့်ကျင်ဘက်အရောင် ပြပါမယ်.
အကျ Bearish harami cross . Harami နဲ့တူတဲ့ candle 2ခု ပေါင်းပုံစံပါ. ကွာခြားချက်က နောက်ဆုံးတစ်ခုက doji ပုံစံပါ.
Three black crows ကျီးနက်သုံးကောင် . Candle သုံးချောင်းပေါင်းပုံစံပါ. အတုံးကိုယ် ရှည်ရှည်နဲ့ bearish candle သုံးခုဆက်တိုက်ရှိပါမယ်. တစ်ခုစီက ရှေ့တစ်ခုရဲ့ အတုံးကိုယ် အလယ်ရဲ့အောက်နားကနေ open လုပ်ပါတယ်. တစ်ခုချင်းစီရဲ့ Close က low အနားလေးမှာရှိပါတယ်. အသုံးချနိုင်မှုက အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်. အတည်ပြုဖို့အတွက် အကျ Bearish candlestick က close နိမ့်နိမ့် ဒါမှမဟုတ် ကျနေတဲ့ အဟလေး ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်.
Bullish အတက် ပုံစံများ
အတက် ပြောင်းပြန်လှန် ပုံစံက Uptrend အတက်လမ်းကြောင်းရဲ့ အဆုံးမှာရှိပါမယ်.
Hammer တူပုံစံ . Candle တချောင်းထဲပုံစံ. Bearish trend လမ်းကြောင်း အဆုံးသတ်၊ bottom level သို့မဟုတ် support level တခုခုကို ညွှန်ပြနေပါတယ်. ဒီ Candle ရဲ့ အချောင်းအတံလေးက အောက်ပိုင်းမှာရှည်နေပါမယ်. ထိုအရှည်က အတုံးလေးရဲ့ ၂ဆ အနည်းဆုံး ရှိပါတယ်. အရောင်ကအရေးမကြီးပါဘူး. ဒါပေမဲ့ အတက်ဖြစ်ရင်တော့ အချက်ပြ signal က အားကောင်းနေပါပြီ. ထပ်ရှိမဲ့ အတက် bullish တွေကနေ အတည်ပြုနိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်. ဝယ်ယူမှုကို အချက်ပြနေလားဆိုတာအတည်ပြုဖို့ဆိုရင် candle က ဘယ်ဖက်မှာရှိတဲ့ candle တစ်ခုရဲ့ open ရဲ့ အထက်မှာ close မှသာ စိတ်ချရပါမယ်. ထိုမှသာ အတည်ပြုနိုင်ပါမယ်.
Morning star အရှေ့ဘက် သောကြာကြယ်ပုံစံ . Candle သုံးခုပေါင်း ပုံစံ. Bearish အကျ candle အရှည်တစ်ခုပြီးနောက် အကျပုံ အဟလေး အောက်မှာရှိပါမယ်. အတက်မှာအထိန်းအချုပ်ရှိနေပါတယ် ဒါပေမဲ့ အရမ်းကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူး. ဒုတိယ candle လေးကသေးပါတယ်. အရောင်ကိုလဲ ဂရုစိုက်စရာမလိုပါဘူး. တတိယတစ်ခုကတော့ အဟလေးနဲ့အပေါ်မှာ စပါတယ်. ပြီးတော့ အရင်က အကျအဟလေးကို ဖြည့်ပေးပါတယ်. ပထမတစ်ခုနဲ့ယှဉ်ရင် ဒီတစ်ခုက ပိုရှည်ပါတယ်.
Morning doji star ပုံစံ. Candle ၃ခုပေါင်းပုံစံ. အရင်ကဟာနဲ့ဆင်တူပါတယ်. ဒါပေမဲ့ ထရိတ်ဒါတွေက ဒါကို အချက်ပြမှုကောင်းကောင်းပေးနိုင်တယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်.
ပြောင်းပြန် hammer တူပုံစံ . candle တစ်ခုတည်းပုံစံ. ဒီ Candle ရဲ့ အတုံး ကသေးပြီး အချောင်းအတံလေးက အပေါ်ပိုင်းမှာရှည်နေပါမယ်. ထိုအရှည်က အတုံးလေးရဲ့ ၂ဆ အနည်းဆုံး ရှိပါတယ်. အရောင်ကအရေးမကြီးပါဘူး. ဒါပေမဲ့ အတက်ဖြစ်ရင်တော့ အချက်ပြ signal က အားကောင်းနေပါပြီ. ထပ်ရှိမဲ့ အတက် bullish တွေကနေ အတည်ပြုနိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်.
Piercing line ဖောက်ထွက်မျဉ်းကြောင်းပုံစံ . Candle ၂ခုပေါင်း ပုံစံ. ပထမတစ်ခုက ရှည်ပြီး အကျ Bearish ဖြစ်ပါတယ်. ဒုတိယတစ်ခုကတော့ အဟလေးနဲ့အောက်မှာ open ပါတယ်. အဲ့တာက ပထမတစ်ခုရဲ့close အောက်နားမှာပါ. အတက် candle ပါ. close က ပထမတစ်ခုအတုံးကိုယ်ရဲ့ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း အထက်မှာရှိရမှာပါ. အတုံး နှစ်ခုစလုံး က ရှည်ရှည်လေးဖြစ်သင့်ပါတယ်. အချက်ပြ siginal က အသင့်အတင့် အားကောင်းပါတယ်.
အတက် harami. candle ၂ခုပေါင်းပုံစံ. ဒုတိယတစ်ခုရဲ့အတုံးက ပထမတစ်ခုရဲ့ဝန်းရံမှုကိုခံရပြီး ဆန့်ကျင်ဘက်အရောင် ပြပါမယ်.
အတက် bullish Harami cross . harami နဲ့တူတဲ့ candle ၂ချောင်းပုံစံ. ကွာခြားချက်က နောက်ဆုံးတစ်ခုက Doji ပုံစံပါ.
အတက်ဝန်းရံပုံစံ . Downtrend အကျလမ်းကြောင်း ရဲ့အဆုံးမှာပေါ်တဲ့ candle ၂ ချောင်းပုံစံပါ. ဒုတိယ အတက် candle က ပထမတစ်ခုရဲ့ low အောက်နားကနေ open လုပ်ပြီး ပထမတစ်ခုရဲ့ high အထက်ကနေ close လုပ်ရပါမယ်. (လုံးဝကိုလှမ်းငုံမဲ့ပုံစံပါ). အချက်ပြ siginal က အသင့်အတင့် အားကောင်းပါတယ်.
Three white soldier လူဖြူစစ်သားသုံးယောက် . Candle သုံးခုပေါင်း ပုံစံ . အတုံးကိုယ် ရှည်ရှည်နဲ့ bullish candle သုံးခုဆက်တိုက်ရှိပါမယ်. တစ်ခုစီက ရှေ့တစ်ခုရဲ့ အတုံးကိုယ် အလယ်ရဲ့အထက်နားကနေ open လုပ်ပါတယ်. Candle တစ်ခုချင်းစီ ရဲ့ Close က highရဲ့ အများဆုံးနားလေးမှာရှိပါတယ်. အသုံးချနိုင်မှုက အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်. အတည်ပြုဖို့အတွက် white အဖြူ candlestick က close မြင့်မြင့် ဒါမှမဟုတ် တက်နေတဲ့ အဟလေး ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်.
Candlestick ပုံစံအများစု ဟာ ပြောင်းပြန်လှန်တဲ့ပုံတွေပါ. ဒါပေမဲ့ ရပ်နားနေတဲ့အချိန်များကိုပြတဲ့ အချို့သော trend တွေလည်းရှိပါတယ်. တဆက်တည်းရှိနေတဲ့ပုံစံက ဈေးကွက်မှာ trend က တခဏနားပြီး ရှိနေတဲ့လမ်းကြောင်းမှာဘဲ ဆက်လက်ရှိနေမှာကို ပြောပါတယ်. ထိုပုံစံတွေက entry point တွေကိုခန့်မှန်းရာမှာအသုံးဝင်ပါတယ်. ထို့အပြင် လက်ရှိဖွင့်ထားတဲ့ position တွေကိုဖွင့်ရတဲ့အကြောင်းကိုသက်သေပြုပေးနေပါတယ်.
Uptrend ရဲ့ တဆက်တည်းရှိမှု
Upside Tasuki gap . အတက် bullish candle က အရင်အဖြူရောင် candle ရဲ့အထက် gap အဟ တစ်ခု ပြီးနောက်မှာဖြစ်ပေါ်ပါတယ်. နောက် candle တစ်ခုက အရင်တစ်ခုထက် ပိုနိမ့်တဲ့ open နဲ့ close တွေရှိပါတယ်. Gap အဟ ကိုဖြည့်ထားတာမရှိရင် bull အတက် က အားကောင်းနေပြီး သင်ဟာ open long လုပ်နိုင်ပါတယ်. Gap အဟ ကိုဖြည့်ထားရင် bull အတက်က အားကောင်းတာကနေ ရပ်တန့်ပြီးဆုံးတော့မှာပါ.
Rising three methods နည်းလမ်းများ အဖြူရောင် candle အရှည်လေး ပြီးနောက် အကျ candle လေးတွေ အတွဲလိုက်ရှိပါမယ်. Pull back နောက်ပြန်ဆွဲတဲ့ candle လေးတွေ ရဲ့ပုံမှန်အရေအတွက်က ၃ခု ဖြစ်သင့်ပါတယ်. ၂ခု ၄ခု ၅ခု တွေလဲတွေ့နိုင်ပါတယ်. ဒီ Bearish အကျ candle က bullish အတက် candle ကြီးကြီးရဲ့ open အောက်မှာ close မဖြစ်ဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်. ပြီးတော့ အချောင်းတံလေးတွေက bullish အတက် candle ရဲ့ open အောက်မရောက်သင့်ပါဘူး. နောက်ဆုံးသော candle က အနောက်ဆုံး pull-back candle ရဲ့အတုံးကိုယ်လေးအတွင်းနားမှာ open လုပ်သင့်ပါတယ်. ပြီးတော့ ပထမဆုံး အဖြူရောင် candle ကြီးရဲ့ အပေါ်နားမှာ close သင့်ပါတယ်.
Separating line အခွဲလိုင်းများ. Bearish အကျ candle ရှည်ရှည် ဖွင့်ပြီးနောက် bullish အတက် candle ကလည်း ထိုအကျ candle နဲ့ level အတူတူ ဖွင့်ပြီး ကပ်လိုက်တာမျိုးပါ.
Mat hold ပုံစံ. အဖြူရောင် candle အကြီးပြီး gap အဟလေးရဲ့နောက်မှာ အကျ candle လေးတွေ အတွဲလိုက်ရှိတာမျိုးပါ. ထိုအထဲက ဒုတိယ သို့မဟုတ် တတိယ တစ်ခုက အတက် bullish candle ရဲ့ကိုယ်ထဲကို ဝင်တဲ့ပုံစံမျိုးပါ. နောက်ဆုံး candle ကတော့ အပေါ်ဖက်မှာ gap အဟ ဖြစ်ပြီး ဆက်တက်သွားပါမယ်. အရင်နေ့တွေက ထရိတ်လုပ်တဲ့ နှုန်းတွေထက်မြင့်တဲ့နှုန်းမှာ close လုပ်ဖို့ပါ. ဒါဟာ position တွေမှာ ပေါင်းထည့်ပေးဖို့အတွက် ကောင်းတဲ့နေရာတခုပါ. Mat candle ပုံစံဟာ Rising အတက် နည်းလမ်းသုံးခုထက် အားကောင်းပြီး တဆက်တည်းရှိတဲ့ပုံစံ ဖြစ်ပါတယ်. Rising အတက် နည်းလမ်း သုံးခုနဲ့မတူဘဲ အမှန်ပြန်တည့်မတ်တဲ့နေ့တွေမှာ ဈေးနှုန်းက အဖြူရောင် သို့မဟုတ် အစိမ်းရောင် candle ရဲ့ အမြင့်ဆုံးနှုန်းတွေနားမှာ ရှိနေပါတယ်.
Three Line strike (The fooling three soldiers) ရူးသွပ်တဲ့ စစ်သားသုံးယောက် ပုံစံ အတက် uptrend ဆက်ဖြစ်နေကြောင်းပြတဲ့ အတက် bullish candle သုံးခု ( လူဖြူစစ်သား၃ယောက်3white soldiers) ပြီးနောက် ပိုမြင့်တဲ့နေရာမှာ open ဖွင့်တဲ့ candle တစ်ခုရှိပါတယ်. ဒါပေမဲ့ ပထမ အတက် candle ရဲ့ open အောက်ကို ပြန်ကျပြီးမှ ပိတ်close ပါတယ်. ရေတို နောက်ပြန်ဆွဲနေတဲ့ စိတ်ခံစားမှုဟာ လမ်းကြောင်းနဲ့သွေဖယ်နေပါမယ်. ပြီးတော့ အတက်လမ်းကြောင်းကပဲ ထိုနေရာကနေဆက်ပြီး တက်သွားပါဦးမယ်.
Upside Gap Three Method နည်းလမ်း . Upside Tasuki gap နဲ့ဆင်တူပါတတယ်. အားကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်း ရှိနေတဲ့ဈေးကွက်မှာ ဒီပုံစံဖြစ်ပေါ်ပါမယ်. အတက်လမ်းကြောင်းတစ်ခုမှာဆို gap အဟလေးက bullish အတက် candle ၂ခုကြားမှာ ဖြစ်ပေါ်ပါမယ်. နောက်ဆုံးနေ့မှာ ထိပ်ပိုင်း အတက် bullish အတုံးကိုယ်လေးထဲမှာပဲ open လုပ်ပြီး နိမ့်တဲ့ အတက်bullish ကိုယ်ထဲမှာ closeလုပ်ပါတယ်. သူတို့နှစ်ခုကြားရှိ အဟလေးကိုဖြည့်ရင်းနဲ့ပါ.
အကျလမ်းကြောင်း downtrend ရဲ့ တဆက်တည်းဖြစ်ခြင်း
Downside Tasuki gap ပုံစံ. အရင် အနက်ရောင် candle ကနေ အဟ gap က ကျပြီးနောက်မှာ အနက်ရောင် candle တစ်ခုထပ်ဖြစ်ပါတယ်. အရင်တစ်ခုနဲ့ ယှဉ်ရင် ဒီတစ်ခုရဲ့ open နဲ့ close က ပိုမိုမြင့်မားတဲ့တန်ဖိုးမှာရှိပါတယ်. အဟ gap ကဖြည့်မထားရင် အကျ bear တွေက ထိန်ချုပ်နေပြီး ထရိတ်ဒါက short position ဖွင့် open နိုင်ပါတယ်. Gap အဟ ကဖြည့်ထားရင် အကျက အားကုန်လာပြီး အဆုံးသတ်တော့မှာပါ
On neck line ပုံစံ. ပထမဆုံးသော အကျ candle က ကျနေတဲ့ အဟ gap လေးနဲ့ ဖွင့်ပြီး အတုံးကိုယ်က ရှည်ရှည်လေးရှိပါမယ်. ဒုတိယတစ်ခုက အတက်ပါ. အရင်နေ့တစ်ခုရဲ့ low ကိုရောက်ပြီး close level ကိုတော့မရောက်ပါဘူး.
In neck line ပုံစံ. On neck line ပုံစံနဲ့ ဆင်တူပါတယ်. ကွာခြားချက်က အရင်တနေ့ရဲ့ close နား သို့မဟုတ် close ရဲ့အပေါ်နားမှာ close ပိတ်တာပါပဲ. In net line က အချို့သော အပြောင်းအလဲ အသေးလေးတွေကိုညွှန်ပြပါတယ်. ဒါပေမဲ့ trend ပြောင်းလောက်အောင်ဖြစ်တာမျိုးတွေတော့မဟုတ်ပါဘူး.
Thrusting ပုံစံ. ဒီဟာက On net line, In net line ပုံစံတွေနဲ့တူပါတယ်. တခုကွဲတာက အတက် candle က အရင်တနေ့ candle အနက်ရောင်ရဲ့ အတုံးကိုယ် အလယ်နားလောက်မှာ close လုပ်ပါတယ်.
Falling Three Method ပုံစံ. အကျ candle ရှည်ရှည်ပြီးနောက် ၂ ခုကနေ ၅ခု သော အတက် candle သေးသေးတွေရှိတာမျိုးကိုခေါ်တာပါ. ဒီအတက် candle တွေက အကျ candle ကြီးကြီးရဲ့ open အထက်မှာ close မဖြစ်ဖို့တော့ သေချာသိရပါမယ်. သူတို့ရဲ့ အချောင်းအတံလေးတွေက အကျ candle ရဲ့ open ထက်မပိုရပါဘူး. နောက်ဆုံးတစ်ခုက နောက်ဆုံးသော bullish candle ရဲ့ အတုံးလေးထဲမှာ open လုပ်ရပါမယ်. ဒီ့အပြင် ပထမဆုံး အနက်ရောင် candle ကြီးရဲ့ close အောက်မှာ close လုပ်ရပါမယ်.